Waxbarasho dugsi sare - Utbildningsguiden
› Waxbarasho dugsi sare
Dugsiyada sare ayaa loo abaabulaa siyaabo kala duwan
Dhalinyarada u dhaxeyso dada 16 iyo 20 sano.
Dugsiga sare waxa loogu tala galay dhalinyarada dadoodu u dhaxeyso 16 iyo 20 sano. Waxa dugsiga sare la bilaabi karaa ugu danbeynta sanadka aad buuxiso 20 sano. Qofkii buuxiya 20 sano wuxuu wax ka baran karaa waxbarashada dadka waaweyn. Dugsiga sare waa mid aan qasab aheyn isla markaana lacag ahaan ah.
Ujeedada ugu muhimsan ee waxbarashada dugsiga sare waa gudbinta aqoonta iyo iney ardady helaan fursado faaido u leh isla markaana horumarineysa aqoontooda. Waxbarashada ayaa qeyb ka geysaneysa horumarka ardayga iyo siduu ku noqon lahaa qof masuul qaada, isla markaana si toosa uga qeyb qaata nolosha xirfad iyo tan bulsho.
Waxa howlaha dugsiyada sare ee kala duwan wada degmooyin, shirkado madax banaan iyo gobalo. Waxaa dhamaan iskuulada khasab ku ah iney raacaan sharciga iskuulka, sida waxyaabaha ku saabsan waxa ay waxbarashadu ka kooban tahay iyo shahaaddo bixinta.
Wuxuu dugsi kastee sare fursad u leeyahay uu inuu xoogga saaro maado khaasa sida casharo ingiriis ah ama kuwo dhaqanka iyo ciyaaraha.
Dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa cid kastaa loo ogol yahay iyadoo waxbarashadooduna ay u qalanto tan laga bixiyo dugsiyada degmada. Dugsiyada gaarka ayaa leh milkiile kale oo aheyn degmada.
Tirada guud ee barnaamijyada qaran ee dugsiga sare waa 18, kuwaasoo lix ka midihi yihiin kuwo bixiyo barnaamijyo loogu diyaar garoowo jaamacad iyo 12 ah kuwo xirfadeed.
Dhamaan ardayda qaadata barnaamijyada jaamacad u diyaar garowga waa iney fuliyaan shaqo dugsi sare taasoo muujineysa in ardaygu diyaar u yahay waxbarasho sare ee jaamacad.
Dhamaan barnaamijyada xirfadaha waxa ku jira ugu yaraan 15 todobaad ee waxbarasho loogu tagayo goob shaqo halkaas oo ay waxbarashadu ka soconeyso goob shaqo. Barnaamijka xirfadda ayaa sidoo kale loo fulin karaa qaab dugsi sare ee ardayga wax lagu barayo, iyadoo ugu yaraan waxbarashada barkeed ay ka dhaceyso goob shaqo. Guud ahaan ardayda barnaamijka xirfadda waxey sameynayaan shaqo dugsi sare taasoo muujineysa in ardaydu diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo qeybta uu waxbarashada u diyaarinayo.
Ardayda aan kasban aqoon uu ugu gudbo barnaamijka qaran wuxuu helayaa barnaamijka hordhaca. Barnaamijyadaa ayaa laga helaa fursad uu ardaydu ugu gudbo barnaamijyada qaran ee dugsiga sare ama uu uga qeyb qaato suuqa shaqada.
Barnaamijka hordhaca ayaa loogu tala galay ardayga kasban waaya aqoon uu ugu gudbo barnaamijada qaran ee dugsiga sare. Barnaamijka uu ardaygu ka qeyb qaadanayo waxey ku xiran tahay hadafka uu ardaygu ka leeyahay waxbarashada barnaamijka. Barnaamijka hordhaca waxa lagu beddeli karaa iyaduu ardaygu uu laba sano sii dhigto dugsiga hoose/dhexe si uu shahaado u helo. Barnaamijka hordhaca ayaa loogu tala galay inuu siiyo ardayga kasban waaya u gudubka barnaamijka qaran fursad inuu helo barnaamij uu dhigto ama fursad u hogaamisa inuu shaqo helo.
Waxbarashada barnaamijka hordhaca ayaa raaceysa qorshe waxbarasho wadata ujeedo, mudo ay socoto isla markaana leh maadooyin lagu dhigto. Qorshe waxbarasho ee shakhsi ayuu arday kastaa heleyaa. Taa waxa haqab tireysaa hadafka waxbarasho ee ardayga, baahidiisa iyo waxa uu xiiseeyo.
Laga bilaabo deyrta 2019 waxa jira afar barnaamij hordhac ee kala duwan: Doorasho barnaamij ku wajahan, Hordhac xirfadeed, Ku beddel shakhsi iyo hordhac af. Barnaamijyadan ayaa lagu heleyn qalin jebin, balse ujeedadu waa iney kugu hogaamiyaan barnaamij kale ee qaran ama shaqo.
Waxbarashada ayaa la qaataa wakhti buuxa iyadoona waxa ay ka kooban tahay ay ku xiran tahay qorshaha waxbarasho ee shakhsiga. Qorshaha waxbarasho ee shakhsiga ayaa laga bilaabo 1-da juulaay 2019 sharaxaya ujeedada waxbarashada, waxa ay ka kooban tahay iyo mudada ay socoto. Hadafka waxbarashada ardayga ayaa kadib saameynaya sida uu u ekaanayo qorshaha waxbarasho ee shakhsiga. Ardayga dhameysta barnaamijka hordhaca wuxuu heleyaa shahaaddo dugsi sare.
Si lagaaga caawiyo sidii aad ku ogaan laheyd barnaamijka ku anfaca, waxaad la hadli kartaa hagaha waxbarasho iyo xirfadeed ee iskuulkaada.
Doorasho barnaamij ku wajahan waxa loogu tala galay ardayga doonaya waxbarasho himiladeedu tahay barnaamij khaasa ee qaran si markaa, sida ugu dhaqsaha badan leh, uu ugu gudbo barnaamijka qaran. Barnaamijka qaran ee waxbarashadu ku wajahan tahay ayaa noqon kara mid xirfadeed ama mid u diyaar garow barnaamij jaamacadeed.
Degmada aad deggen tahay ayaa ka masuul ah in ardayda buuxiso shuruudaha doorasho barnaamij ku wajahan, iney soo geli karaan barnaamijka.
Waxa barnaamijka ka qeyb qaadan kara ardayga:
ku baasay iswiidhishka ama svenska som andraspråk,
xisaab iyo ingiriis iyo sadax maaddo ama
iswiidhish ama svenska som andraspråk,
xisaab ama ingiriis iyo afar maaddo.
Hordhac xirfadeed waxa loogu tala galay qofka doonayo waxbarasho xirfad ku aaddan, balse aan heysan shahaaddada looga baahan yahay inu lagu dhigto barnaamij xirfadeed.
Hordhac xirfadeedka ayaa ka kooban waxbarasho si aad u hesho shaqo ama si aad u dalban karto barnaamij xirfad. Waxbarashada ayaa ka koobnaan karta maadooyinka dugsiga hoose/dhexe ee aanu ardaygu shahaaddo ka heysan, koorsooyinka barnaamijka xirfadda, wax ka barasho goob shaqo (apl) ama baraaktiik iyo waxqabad kale ee ardaygu ugu baahan yahay horumarinta aqoontiisa. Waxbarashada kadib wuxuu ardaygu codsan karaa shaqo ama isagoo sii wata waxbarashada barnaamijka xirfadda.
Ku beddel shakhsi
Ku beddel shakhsi waxa loogu tala galay qofka doonaya waxbarasho si uu u shaqeeyo ama sii wato waxbarasho dugsi sare ama mid kale. Waxaa kaa maqan mid ka mida maadooyinka looga baahan yahay in lagu galo barnaamijka qaran.
Waxbarashada waxey tusaalle ahaan ka koobnaan kartaa maadooyinka dugsiga hoose/dhexe ee aanu ardayga shahaado ka heysan, koorsooyinka barnaamijka qaran iyo howlaha kale sida kuwa kordhiya xiisaha ama baraaktiik. Waxbarashada kadib wuxuu ardaygu raadsan karaa shaqo ama wuxuu sii wadan karaan dugsi sare.
Hordhac af ayaa loogu tala galay ardayga ku cusub Iswiidhen isla markaana aan heysan shahaaddada looga baahan yahay in lagu dhigto barnaamijka qaran una baahan waxbarashada afka iswiidhishka. Waxbarashada ayaa xoogga lagu saarayaa afka iswiidhishka si uu ardaygu ugu gudbo barnaamij kale ee hordhac, barnaamij qaran, waxbarashada dadka waaweyn ama xirfad. Warbarashada ayaa loo eegayaa isla markaana la waafajinayaa waaya aragnimada ardayga, aqoontiisa iyo hadafka waxbarasho.
Waxbarashada ayaa ka koobnaan doonta casharo iswiidhisha iyo maadooyin kale ee dugsiga hoose/dhexe, koorsooyin barnaamijka qaran iyo howlo kale ee ardaygu ugu baahan yahay horumarinta aqoontiisa. Waxbarashada kadib wuxuu ardaygu dhigan karaa dugsiga sare ama waxbarasho kale.
Waxad iskuulka ka heleysaa warbixin joogta oo ku saabsan waxaad baratay iyadoo loo eegayo hadafka waxbarashada iyo casharada.
Macalinka, adiga iyo ardayda kale, ayaa bixin kara fiidbaak qeyb ka geysta horumarinta waxbarashada. Macalinka iyo ardayga ayaa ka wada hadlaya siduu ardaygu u horumarin lahaa waxbarashadiisa iyadoo la qiimeynayo waxaad u baahan tahay iyo waxaad taqaan. Waa muhim inaad adigu fahamsan tahay waxbarashadaada iyo baahida aad u qabto horumar.
Wada hadalka horumarka dugsiga sare
Ugu yaraan halmar teeram kasta ayaad adiga, macalinkaada iyo masuulkaada sharci (haddii ay dadaadu ka yar tahay 18 sano) kulmeysaan iyadoo la eegayo waxbarashadaada iyo sidaad mabsuud u tahay. Waxa wada hadalkan loogu yeeraa wada hadalka horumarka. Wada hadalka ayaa sawir ka bixinaya horumarkaada aqooneed iyo kan bulsho.
Waxa laga wada hadli doonaa siduu iskuulku kaaga taageeri karo isla markaana kuugu baraarujin karo horumar iyo waxbarasho wanaagsan. Wada hadalkan ayaa adiga iyo masuulkaada sharciba fursad idiin siinaya sidii aad ku saameyn laheydeen isla markaana aad masuuliyad uga qaadi laheyd waxbarashadaada. Waxaa kaloo looga hadlaa haddii aad qabto baahi la qabsiga iskuulka iyo haddaad u baahan tahay gargaar gaar ah.
Shahaaddo iyo shahaaddo bixinta dugsiga sare
Ardayda barnaamijka qaran waxey heleyaan shahaaddo marka kasta uu dhamaado kooras. Kooras kasta wuxuu leeyahay shuruuddo aqooneed oo sheegaya waxa loo baahan yahay in la fuliyo. Shahaaddada waxa la bixiyaa dhamaadka kooras kasta iyo xilliga la fulinayo shaqada dugsiga sare.
Barnaamijka hordhaca isaga macalinka ayaa bixiya shahaaddo marka kastaoo kooras dhamaado ama la dhigto maaddo dugsi hoose/dhexe.
Darajada shahaaddada waa lix nooc: A – F. A - E oo u taahan natiijo baasi ah iyo F oo u taagan shahaaddo dhicitaan ah. Markaad shahaaddo ka hesho koorsooyinka oo dhan iyo shaqada dugsiga sare waxaad kadib heleysaa shahaaddada ugu danbeynta. Xariijin baa la marinayaa shahaaddada haddii uu maqnaashahaadu badnaa isla markaana aanu macalinka shahaaddo kugu siin karin maadada.
Dugsiga sare ee gaarka ah waa waxbarasho socota afar sano oo loogu tala galay ardayga dadiisu u dhaxeyso 16 iyo 20 sano isla markaana qaba carqalad horumar/ naafo caqli ama uu la soo gudboonaadan dhaawac maskaxeed. Dugsiga saree ee gaarka ah wuxuu ka kooban yahay barnaamijka qaran iyo barnaamij shakhsi.
Barnaamijyada qaran iyo kuwa gaarka ah
Waxa dugsiga sare ee gaarka ah ka jira sagaal barnaamij qaran. Dhamaantood waa kuwo xirfad diyaarina ujeedadooduna tahay iney ardaydau diyaariyaan nolosha shaqada. Barnaamijka howlaha farshaxanka (estetik) iyo kan bulshada, beyadda iyo afka waxaa kaloo loogu diyaar garoowaa waxbarasho laga qaato sida dugsiga la seexdo ee dadka waaweyn ee folkhögskola. Barnaamijyada qaran waa kuwo gaar ahaan ha kuwo lagu diyaariyo xirfado. Barnaamij qaran waxaa xataa loo fulin karaa sidii waxbarasho goob shaqo ee dugsi sare, iyadoo waxbarashada barkeed ay ka dhaceyso mid ama dhowr goobo shaqo.
Ardayda oo dhami waxey sameyn karaan shaqo dugsi sare oo gaarka ah, halkaasuu ardaygu ku fulin karo howlo shaqo caadi ah ee dhinacyada xirfadeed ee barnaamijka.
Barnaamijyada gaarka ah waxa loogu tala galay ardayda aan ka qeyb qaadan karin casharada barnaamijka qaran. Barnaamij kasta wuxuu soconayaa afar sano wuxuuna ka kooban yahay maadooyinka kala duwan.
Xataa shaqo baraaktiko ah ayaa ka mid noqon karta barnaamijyada shakhsi.
Codsiga barnaamijka dugsiga sare ee gaarka ah
Codsiga barnaamijyada qaran ama shakhsi ee dugsiga sare ee gaarka ah waxa shaqo ku leh degmada eegeysa codsiga isla markaana goaan ka gaareysa.
Waxaad iskuulka ka heleysaa warbixin joogta ah ee ku saabsan waxa aad baratay marka loo eego hadafyada barnaamijyada iyo hadafka casharada.
Ugu yaraan hal mar tarmiin kasta ayaad adiga, macalinkaada iyo masuulkaada sharci kulmeysaan iyadoo la eegayo waxbarashadaada iyo sidaad mabsuud u tahay. Waxa wada hadalkan loogu yeeraa wada hadalka horumarka. Wada hadalka ayaa sawir ka bixinaya horumarkaada aqooneed iyo kan bulsho.
Waxa laga wada hadli doonaa siduu iskuulku kaaga taageeri karo isla markaana kuugu baraarujin karo horumar iyo waxbarasho wanaagsan. Wada hadalkan ayaa adiga iyo masuulkaada sharciba fursad idiin siinaya sidii aad ku saameyn laheydeen isla markaana aad masuuliyad uga qaadi laheyd waxbarashadaada. Waxaa kaloo looga hadlaa haddii aad qabto baahi la qabsiga iskuulka iyo haddaad u baahan tahay gargaar gaar ah
Ardayda barnaamijka qaran waxey heleyaan shahaaddo marka kasta uu dhamaado kooras. Kooras kasta wuxuu leeyahay shuruuddo aqooneed oo sheegaya waxa loo baahan yahay in la fuliyo. Ardayga dhigtay barnaamij qaran ama mid gaarka ah wuxuu heleyaa cadeyn dugsi sare ee gaarka ah markuu markuu dhameysto barnaamijka.
Waxaa shahaaddo loo isticmaalaa xuruufta A-E. Shahaadadda ugu sareysa waa A halka tan E ay tahay tan ugu hooseysa. Barnaamijyada gaarka ah shahaaddo laguma bixiyo ee waxaa la qiimeeyaa aqoonta ardayga markuu gaaro heerka waxa laga doonayo.
La xiriir hagaha waxbarasho iyo xirfadeed ee iskuulkaada si aad u hesho talo iyo waxbixin ku saabsan barnaamijka kugu haboon.